Zvirongwa zvekufamba: Iko Gen Z, Millennials uye Gen X kupokana uye kwavanoenderana?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Zvirongwa zvekufamba: Iko Gen Z, Millennials uye Gen X kupokana uye kwavanoenderana?
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kufamba kwekudzidza kunoratidzira kusawirirana uye kuenderana pakati peGen Z, Millennials naGen X.
Gen Z ndicho chizvarwa chinonyanya kufarira chine inopfuura hafu (51%) kuronga nzendo dzekunze uye 37% yekumba.
Gen X anonyanya kuzeza ne33% vasina kuenda kune rimwe guta mune rinopfuura gore.
Kudzivirirwa kunoramba kuri pamusoro pepfungwa kuzvizvarwa zvese, vaine inopfuura hafu yevanopindura kubva kuchizvarwa chimwe nechimwe vachiti ndiko kunetsekana kwavo kwakapoteredza zvirongwa zvekufamba.
Chidzidzo chitsva chinoratidzira kufamba kweAmerica kuri pamusoro pepfungwa dzevanhu vese, kunyangwe zvizvarwa zvakakamurwa munzira yavo yekuronga mafambiro.
Kune zvimwe zvinhu zvekufamba nekuronga Gen Z, Millennials uye Gen X vanowirirana pane - kuchengetedzeka kunetsekana, kutsamwiswa kwebhajeti uye chishuwo chezvekunze kwekunze.
Zvisinei, pane kupatsanurana pakati pemapoka aya - kureba kwavari kutarisira kuenda, kuwanda kwekufamba, bhajeti uye izvo zvavari kuda kushandisa imwe mari kune avo nzendo.
Sevanhu vemuAmerica Vanotarisira Mberi Kufamba, Millennials uye Gen X Gara Pedyo Nekumba Ipo Z Z Inotarisa Nyika Dzese
Vanhu vekuAmerican vanga vari vega vakamirira zuva rekurambidzwa kwekufamba uye vanogona kutanga kuronga zvekare.
Vazhinji vakapindura kumazera (70%) vatanga kuronga zororo ravo, asi kuri kuenda vanhu kunosiyana.
Maguta epamusoro epasi rese evashanyi vekuUS anosanganisira San Juan, Dubai, Cyclades neParis.
Vafambi veGen Z vanogona kushandisa zvakanyanya nzvimbo dzavanofarira mhiri kwemakungwa nezviitiko zvisingakanganwiki senge bioluminescent bay chikepe uye kushanya kwematsime anopisa muSan Juan, safari renje mu Dubai, zvitsuwa zvinoputika zvinofamba muCcyclades uye French macarons yekubheka kirasi muParis.
Inenge hafu yeMireniyamu (48%) uye inopfuura hafu yeGen Xers (61%) vari kuronga kugara mudzimba. 35% yeMillennials uye 20% yeGen Xers vari kutsvaga kuenda kune dzimwe nyika.
Gen Z neMillennials vanga vachitora mukana wekusimudza mafambiro - 37% yeGen Zers uye 34% yeMireniyamu vakaenda kune rimwe guta mumwedzi wapfuura. Kune rimwe divi, Gen X iri kuzeza ne33% isina kuenda kune rimwe guta mune rinopfuura gore.
Zvizvarwa zvese zviri kutarisira kwazvo kuenda kumahombekombe - kuzviisa pakutanga, pamusoro pemakomo, maguta uye kumaruwa. Mabhishi aidiwa eMiami neSan Diego anogona kunge akaisa nzvimbo idzi mumaguta mana epamusoro eUS kuGen Z, Millennials naGen X.
Pamusoro pegungwa, Gen Z uye Millennials vari kufarawo kutsvaga maguta matsva - nzvimbo dzavari kuronga kushanyira mukati meUS dzinosanganisira New York City, Miami, Los Angeles neSan Diego.
Gen X ari kutsvaga kuronga kushanya kuNew York City, Miami, San Diego uye Washington, DC